Wikipedia:Takelaka/Tahiry 2010 - Wikipedia
Ankehitriny, manan-danja be ny tananan'i Moscou ao amin'ny toe-karenan'i Rosia, mahavokatra ny 25%n-ny PIB ny federasiona izy. Lasa « Géante Capitaliste » Moskva teo aorian'ny andro komonista ary efa manan-danja Moskva eo amin'ny toe-karena eoropeanina. Ny faribohitr'i « Moskva-City » ny evan'ny fiovan'ny Moskva. Fa tsy nandeha tsy nisy olana io fiovàna io. Ny elanelana ara-toe-karena ny olona dia lasa nihabetsaka avy hatrany : Misy silaka manan-karena ary miha-manan-karena, ary misy ny mahantra miahamahantra.
Indonezia, na amin'ny toetra ofisialy Repoblikan' Indonezia (fiteny indonezianina : Republik Indonesia) dia arsipely manana nosy 17 508. Ny fihisin'ny Indonezia dia eo anelakelan'ny tanjon'ny atsimo atsinanan'ny Azia sy Aostralia, anelakelan'ny ranomasimbe indianina sy ny Ranomasimbe Pasifika. Mizara sisintany miaraka amin'ny Malaizia eo amin'ny nosin'i Borneo, miaraka amin'ny Papoazia-Ginea Vao any amin'ny nosin'ny Ginea Vao ary amin'ny Timoro Atsinana eo amin'ny nosin'i Timor. Nosy 6 000 amin'ny 17 508 no misy olona ary 80 000 km mahery ny tontalin'ny amorontsirak'i Indonezia.
Aljeria (fiteny arabo :الجزائر, fiteny tamazight: Dzayer) dia firenena any afrika avaratra, ao amin'ny faritany tenenina hoe Maghreb. Ny renivohiny dia Alger, any avaratr' Aljeria, eo amin'ny amorontsiraka Mediteraneanina. Manam-pivelarana 2 381 741 km² ny Aljeria. Izy ny firenena ngeza indrindra manana amorontsiraka amin'ny ranomasina Mediteranea ary ny Aljeria ny firenena ngeza indrindra any afrika eo aorian'i Sudan. Mizara sisin-tany miaraka amin'i Tonizia sy Libia izy any atsinanana, miaraka amin'i Mali sy Niger any atsimo, ary miaraka amin'i Maroc sy Maoritania any andrefana.
Mpikambana ny United Nations, ny Vondrona Afrikaina ary ny Ligue des Etats Arabes izy tamin'ny 1962, daty ny fahaleovantenany, hatramin'izao. Niditra tamin'ny fikambanan'ny firenena mamoaka solika (OPEP) izy tamin'ny 1969. Nandray anjara ny Aljeria tamin'ny famoronana ny Vondrona ny Magreba arabo (UMA) tamin'ny 1989.
Ny Finlandy dia firenena any Eoropa Avaratra ao amin'ny vondrona eoropeanina hatry ny 1995.
Ny Finlandy dia manana amorontsiraka eo amin'ny ranomasina Baltika, indrindra eo amin'n gôlfan'i Bôtnia ary ny gôlfan'i Finlandy any atsimo. Ny tany misy an'i Finlandy dia misy any avaratry ny faribolan-tendrontany avaratra ao amin'ny faritra atsinanan'ny Fenôskandia, izy no firenenan' Eoropa avaratra any ivelan'i Skandinavia.
Ny velarantan'i Finlandy dia 338 145 kilometatra efa-mira eo anelanelan'i Rosia any atsinanany, ny Norvezy any avarany, ary ny Soeda any avaratra andrefana, io izany ny firenena faha dimy ngeza indrindran' Eoropa.
Io toerana io dia tratra ny hatsiaka ary ngazana an-tapany mandritry ny andro ririnina, ny 5,3 tapitrisa mponina isain'ny demôgrafiam-pirenena dia manao an'i Finlandy firenena anisan'ny kely hakitroka indrindra eto an-tany. Ny ankabeazan'ny olona mipetraka any Finlandy dia mipetraka any atsimo, eo amin'ny faritany atsimo, misy ny renivohitra Helsinki, sy ny tanàna ngeza indrindra, toy Espoo sy Vantaa, ao amin'ny Faritanin-drenivohitra. Ny finlandey dia manana teny ofisialy roa, ny teny finoa ary ny teny soedoa, ary ao anatin'ireo teny ireo, Suomi sy Finland ny anaram-pirenena.
Imerina-Ambaniandro dia anarana teraka teo Ambohidrabiby.
Ankotrokotroka no anarany faha-vazimba, ka Ramasinamparihy sy Andrianakotrola (nalaza ho nahay varatra) no Vazimba nifandimby nanjaka tao.
Tamin'ny tapaky ny taonjato faha-16, Habib (nogasiana hoe Rabiby), Mpanjaka arabo sy ny vahoakany ary ireo angaralahiny, niainga tany Ambohitsitakatra (Anjozorobe), no nandroaka ny Vazimba tao Ankotrokotroka. Nanan-daza loatra i Rabiby ka nahavery anarana ny vohitra ho lasa Ambohidrabiby, izay misy ny fasany (sary eo an-kavia). Mpanandro nikoizana koa izy ka voatazon'ny ohabolana hoe "aza milaza mahita volana alohan'i Rabiby". Novain-dRabiby ho teny arabo ny anaram-bolana 12 sy ny anaran'andro 7 raha tamin'ny teny vazimba sy maley izany. Ka ny Alahamady no nataony volana voalohany. Ramaitsoankanjo no vadiny izay niterahany an-dRamaitsoanala mianadahy avy.
Tamin'i Rabiby dia fanjakana vazimba sy maley mitsitokotoko maro ny taty anivon'ny riaka. Andriamanelo, Mpanjaka maley tao Alasora tamin'ny taona 1540-1575, no nangataka an-dRamaitsoanala (novaina anarana ho Randapavola) ho vadiny ka niterahany an-dRalambo tamin'ny andro vava alahamady.
Ny Soeda (Sverige), na fanjakan'i Soeda (Konungariket Sverige ; AAI : [ˈko:.nɵ.ŋa.ˌri:.kət ˈsvær:.jə]), dia firenena ao Eoropa avaratra ao amin'ny faritan'i Skandinavia. Ny renivohiny dia Stockholm, ny isam-poniny dia 9 223 766 tenenina hoe soedoa. Ny teny tenenina dia ny fiteny soedoa. Ny fiteny finoa sy ny fiteny sami koa dia tenenina, indrindra any avarany. Misy matetika ny fitenim-paritra.
Miaraka amin'ny velarantaniny 449 967 km2, ny Soeda dia firenena fahatelo ngeza indrindra any Eoropa Andrefana. Ny hakitroky ny mponina any Soeda dia kely raha oharina amin'ny hakitroky ny mponin'ny firenena manodidina azy ; ankoatran'ny tanàna sy ny faritra manodidina azy ireo, ny hakitroky ny mponina dia latsaky ny 4,3 mponina/km2. 84%-n'ny soedoa no miaina any an-tanàna kanefa 1,3%-n'ny velarantany tontaliny fotsiny ny tontalin'ny velarantan'ny tanàna rehetra. Manan-danja amin'ny mpanao pôlitika sy ho an'ny ankabeazan'ny mponina ny olana mikasika ny tontolo iainana.
Ny Soeda dia hatra ny ela mpamoaka vy, varahina ary hazo. Ny fivoarana ara-indostria sy ara-toe-karena dia nanomoka tamin'ny taona 1890, nahafahan'ny soeda nivoatra, ary manana toerana tsara ao amin'ny filaharana eoropeana momban'ny IDH. Ny Soeda dia manana ranomamy be dia be eo amin'ny tany, fa tsy ampy solitany sy angôvo fosily (énergie fossile) izy toy ny solitany na ny arintany.
I Christophe Colomb (teraka anelanelan'ny 25 Aogositra sy ny 31 Oktobra 1451 tany Gênes - Maty tamin'ny 20 Mey 1506, tany Espaina) dia olona voalohany indrindra tamin'ny Tantara niampita ny Ranomasimbe Atlantika amin'ny alalan'ny fahitana lalana vaovao mandeha-miverina anelanelan'ny kontinenta Amerikana sy ny Eoropa. Nanao zotra efatra izy hoatry ny mpamily sambo, ary niasa ho an'ny Mpanjaka Katolika (Reyes Católicos, amin'ny fiteny espaniola) Isabelle de Castille sy Ferdinand d'Aragon, nampalasa azy ny lohateny Manjaka Faharoan' India ary ho lasa sefon'ny nosy sy tany ho hitany. Ny fahitana ny eran'ny Karaiba dia nanamarika ny fanjanatanin' Amerika. Io fahitam-baovao io dia manamarika ny fanombohan'ny Fotoana Moderna.
Ny Frantsa na République Française (amin'ny fiteny malagasy : Repoblika Frantsay) dia firenena mpikambana amin'ny vondrona eoropeana. Any Eoropa andrefana ny misy azy. Manana zanatany (Territoire sy département d'outre-mer) maromaro ny lafrantsa, ny ngeza indrindra amin'izy ireo dia ny Guyane Française.
Ny renivohiny, Paris, dia anisan'ny be mpitsidika indrindra eto an-tany, 45 tapitrisa ny isan'ny torista mandeha any isan-taona. Manam-pivelarana 675 417 km2 ny lafrantsa raha kaontiana ny fivelaran'ny zanatany. Ny isa-mponiny dia nikaonty 65,1 tapitrisa tamin'ny 1 Janoary 2009.
Ny fiteny frantsay ny tenim-pirenenan'i Frantsa. Kanefa ny fiteny hafa tenenina any frantsa dia miisa dimy ambin'ny folo raha kaontiana ny fiteny tenanin'ny vahiny. Any frantsa no be mpiteny frantsay indrindra ao aorian'i Repoblika Demokratikan'i Kongo.
Ny fiangonana any Frantsa dia fiangonana katôlika, 51-64 isan-jaton'ny frantsay no vita batemy. Fa milaza agnôstika ny 32 isan-jaton'ny frantsay, ary mitovy isa ny isan'ny tsy mpino.
Ny andriky ny toe-karenan'i lafrantsa dia kapitalista, fa betsaka ihany ny orinasa tantanan'ny firenena teo aorian'ny Ady Lehibe Faharoa, mba hamerina ny herin'ny ekonomiany. Fa tamin'ny 1980, nisy reforma be dia be natao mba hanao privatisatio ny orinasa pioblika (publique). Tamin'ny 2008, lafrantsa ny tanjaka faha dimy eo an-tany, eo aorian'ny Etazonia, ny Japana, ny Sina sy ny Alemaina.
Madagasikara na Repoblikan'i Madagasikara (anarana ofisialy; na koa Repoblika malagasy taloha) dia firenena na tany (fitambarana nosy) eo amin'ny Ranomasimbe Indianina. Madagasikara dia Nosy fahefatra lehibe indrindra eto an-tany. Toerana fonenan'ny 5%-n'ny biby sy zavamaniry misy eto amin'izao tontolo izao; ka mihoatra ny 80%-n'ireo dia Madagasikara irery ihany no manana azy (na ahitana azy eto an-tany). Voasokajy ao anatin'ireo ny Gidro sy ny Rajako isankarazany, ny fosa, ny fianakaviam-borona telo (3) sy zava-maniry toy ny Baobaba izay ahitana sokajy mihotra ny enina (6).
Nandritry ny taonjato faha 19, ny nosin'i Madagasikara dia voazakan'ny Fanjakan'i Madagasikara, nihongana tamin'ny fanafihan'ny frantsay tamin'ny 1895. Ny Governemanta malagasy voalohany dia tamin'ny 10 Oktobra 1958 ary tamin'ny 1960, nahazo ny fahaleovantenany Madagasikara tao aorian'ny tolon'ny tia-tanindrazana. Madagasikara no nahazo no anisan'ny firenena voalohany nahazo fahaleovantena tao amin'ny faritry ny Ranomasimbe Indianina sy ary anisan'ny voalohany indrindra tao amin'ny faritra atsimon' Afrika.
Ny Teratan' Amerika dia olona nipetraka teo amerika teo aloha ny eoropeanina. Amin'ny fiteny anglisy, Native Americans ny anarana omena azy matetika. Araka any fomba vaovao fahatongavan'ny teratany ny amerika tany amerika, avy any Eorazia ny teratan'ny amerika ary tonga tany amerika tamin'ny Beringia taloha (mbola tsy nisy rano teo amin'ny detroit de Bering tamin'izany fotoana izany). 12 000 taona lasa ny fifindra-monina farany. Ny Paleô-indianina ireo dia niparitaka manerana ny Amerika, niova ary nihabetsaka ny kolontsaina sy ny fiteny noho ny fiparitahany. Ny teny Indianina dia avy amin'i Christphe Colomb, nihevitra hoe tonga tany Azia (India Atsinanana) izy nefa tany amerika izy no nitotona, noho izany dia lasa indianina ny anarana nomeny an'ny teratany satria tamin'izany fotoana izany, mbola tsy fantatra ny fisian'ny kontinenta amerikana (izy irery ny anisan'ny voalohany nihampita ny Ranomasimbe Atlantika tamin'izany fotoana izany).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Takelaka/Tahiry_2010&oldid=36966"
Voaova farany tamin'ny 25 Septambra 2009 amin'ny 20:35 ity pejy ity.